Stay at Home မှာ ထိခိုက်မိနိုင်တဲ့ ဒဏ်ရာတွေ နဲ့ စောင့်ရှောက် ဂရုစိုက်နည်း အဖုံဖုံ - Hello Sayarwon
Stay at Home မှာ ထိခိုက်မိနိုင်တဲ့ ဒဏ်ရာတွေ နဲ့ စောင့်ရှောက် ဂရုစိုက်နည်း အဖုံဖုံ
ခုကာလက ကူးစက်ပြန့်နှံ့လွယ်တဲ့ COVID_19 ဖြစ်နေတာကြောင့် အချိန်တော်တော်များများကို နေအိမ်မှာပဲ ကုန်ဆုံး နေရတယ်နော်။ ဒီကာလမှာ အပြင်ထွက်ရင် ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေများတာကြောင့် နေအိမ်မှာနေရင်း အဖြစ်များတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ထိခိုက်တာတွေ မဖြစ်စေဖို့ ဘယ်လို သတိထားကြမလဲ… ဖြစ်လာခဲ့ရင်ကော ဘယ်လို စောင့်ရှောက် ဂရုစိုက်မလဲ… ဒီဆောင်းပါးလေးကနေ မျှဝေပေးပါရစေ။
နေအိမ်ထဲက အများဆုံး သွားလာနေထိုင်မိနိုင်တဲ့နေရာတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ………
ရုံးတက်နေရချိန်က မနက်ရုံးသွား ညနေရုံးပြန်ရင်း နေအိမ်ရဲ့ နေရာတိုင်းကို လျှောက်မသွားနိုင်ပေမယ့် ခုလို Stay at Home နေချိန်မှာတော့ နေအိမ်ရဲ့ နေရာတော်တော်များများကို သွားလာမိနေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာတွေကို အများဆုံး သွားမိမယ်ထင်လဲ………
အခြားနေရာတွေကို သွားမိနိုင်ပေမယ့် ဒီအခန်းတွေမှာ နေမိချိန်လောက် မများပါဘူး။
အိမ်မှာနေရင်း နေရာအလိုက် ထိခိုက်မိနိုင်တာတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ..
အိမ်မှာနေရင်း ထိခိုက်မိနိုင်တဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကတစ်ခုမကပါဘူး။ နေရာအလို်က ထိခိုက်မိနိုင်တဲ့ ဒဏ်ရာတွေက ဘာတေါ ဖြစ်မလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးမယ်နော်။
အရေပြား အညိုအမည်းစွဲတဲ့ ဒဏ်ရာရနိုင်တယ်
ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ ရနိုင်တယ်ချော်လဲတာကြောင့် ထိခိုက်မိနိုင်တယ်။
ဓားရှမိတာကြောင့် ပြတ်ရှဒဏ်ရာ ရနိုင်တယ်။
အပင်စိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့် ပြတ်ရှဒဏ်ရာ ရနိုင်တယ်။
ဒီလို ဒဏ်ရာတွေရရင် ဘာလုပ်ရမလဲ……………
ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေကွဲပြားသွားပေးမယ့် ဒဏ်ရာစောင့်ရှောက်နည်း အခြေခံအချက်တွေကတော့ အတူတူပါပဲ။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတစ်ခုရခဲ့ရင်
အနာကို ပိုးမဝင်စေဖို့ အနာကို မထိတွေ့ခင် လက်ဆေးပါ။လက်ဆေးတဲ့အခါ ဘက်တီးရီးယားတွေကို သေစေနိုင်တဲ့ ဆပ်ပြာနဲ့ ရေကို အသုံးပြုပါ။
အနာကို ပတ်တီးစသန့်သန့် ဒါမှမဟုတ် ဂွမ်းစသန့်သန့်နဲ့ ခပ်ဖွဖွလေးဖိထားပြီး သွေးတိတ်အောင် အရင်လုပ်ပါ။
ပြီးရင်တော့ အနာကို အရက်ပြန်နဲ့ ဂွမ်းစသုံးလို့ သေချာသန့်စင်ပါ။ အနာတဝိုက်ကို သေသေချာချာပိုးသတ်ပါ။ အနာသန့်စင်မှု က အနာကျက်စေဖို့ တော်တော်လေး အရေးပါပါတယ်။ အပူလောင်ဒဏ်ရာကိုတော့ ဒီလိုသန့်စင်ဖို့ မလိုပါဘူး။
ဒဏ်ရာကြီးရင် ပတ်တီး…. ဒဏ်ရာသေးရင် ပလာစတာ………..
အနာတိုင်းမလိုပေမယ့် အရေပြား အညိုအမဲစွဲတဲ့ ဒဏ်ရာမျိုးဆိုရင်တော့ ရေခဲဝတ်ကပ်ပေးတာက သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ပါ။
အနာကျက်စေဖို့ဆိုရင် အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားရပါမယ်။ ဒီတော့ အရောင်အသွေးစုံစုံလင်လင်လေး စားပေးပါ။
ပြည့်ဝတဲ့ အိပ်စက်မှုက ကိုယ်ခံအားကောင်းစေပြီး အနာကျက်စေနိုင်ပါတယ်။
How Should I CleanaWound? https://www.webmd.com/first-aid/relieving-wound-pain#2 Accessed Date 21 April 2020
Top tips for wound care at home https://advancedtissue.com/2019/02/top-tips-for-wound-care-at-home/ Accessed Date 21 April 2020
What to know about open wound care https://www.medicalnewstoday.com/articles/325260 Accessed Date 21 April 2020